Xiisadda cimilada ayaa si iskeed ah ugu dhawaaqday, cod dheer iyo aargoosi. Abaaraha, daadadka, iyo dababka ayaa durba kor u qaadaya dhaqaalaheena iyo nolol maalmeedkooda, iyo saynisyahannada adduunka oo idil ayaa noo sheegaya in tani ay hordhac u tahay masiibo soo socota.
Isla markiiba, Kongareeska Mareykanka wuxuu ku xirmay wada xaajoodyo xasaasi ah oo ku saabsan xirmo miisaaniyadeed oo ay ku jiraan siyaasado cimilo oo adag oo ka caawin doona ummaddeena, dowlad-goboleedyadayada, iyo shirkadaha cabbirkoodu kala duwan yahay inay si buuxda ula kulmaan caqabadda. Qorshuhu wuxuu noqon karaa fursadii ugu dambaysay, ee ugu fiicnayd ee aan kaga hortagi karno dhibaatadan kahor intaysan goori goor tahay.
Tonya Allen, madaxweynaha McKnight Foundation, iyo Anne Kelly, madaxweyne ku xigeenka xiriirka dowladda ee Ceres, ayaa ku farxay inay dhexdhexaadiyaan a dhacdo dalwaddii bisha Sebtember 17 ee hoggaamiyeyaasha ganacsiga ee Midwest, iyaga oo siinaya fursad ay si toos ah uga maqlaan saddex ka mid ah horyaallada tamarta nadiifka ah ee muhiimka ah ee u shaqeeya isbeddel waara.
Xoghayaha Tamarta ee Mareykanka Jennifer Granholm, Senator -ka Mareykanka ee Minnesota Tina Smith, iyo Guddoomiyaha Wakaaladda Xakamaynta Wasakheynta Minnesota Peter Tester wuxuu ka hadlay doorka muhiimka ah ee ganacsatadu ka ciyaaraan dhimista qiiqa iyo hagida siyaasadaha gobolka iyo federaalka ee hubin doona dhaqaale nadiif ah, caddaalad ah, oo waara.
Ganacsiyada hoggaamiya waxay noqdeen qaar ka mid ah u doodayaasha ugu muhiimsan siyaasadda cimilada ee adag. Waxay og yihiin in masiibada cimiladu ay u burburin doonto dhaqaalaha, iyo u gudubka mustaqbalka tamarta nadiifka ah waxay soo bandhigaysaa fursad aad u weyn — oo faa'iidooyin waaweyn u leh ganacsiyada iyo bulshooyinka ay ka shaqeeyaan.
Granholm, Smith, iyo Tester waxay carrabka ku adkeeyeen in tallaabooyinka cimiladu ay ku jiraan xirmada miisaaniyadda - oo ay kujirto Barnaamijka Waxqabadka Korantada Nadiifka ah si ay si dhaqso leh ugu ballaariyaan dhalinta korontada nadiifka ah ee dalka oo dhan, dhiirrigelinta tamarta nadiifka ah iyo baabuurta korontada, iyo siyaasadaha kale si loo hormariyo caddaaladda deegaanka loona abuuro shaqooyin cusub oo wanaagsan dalka oo dhan - ayaa muhiim u ah furitaanka fursadahaas. Waa kuwan qaar ka mid ah farriimihii muhiimka ahaa ee ay gudbiyeen:
"Kaliya kaligaa ma sameyn karno tan"
"Dowladda federaalka, keligaa ma yeeli karno tan," ayay tiri Granholm. "Waxaan u baahanahay inaan si wadajir ah ula shaqeyno waaxda gaarka loo leeyahay, oo leh samafal, si aan u gaarno himilooyinkan waaweyn, timaha leh, geesinimada leh."
Badhasaabkii hore ee Michigan, Granholm ayaa sidoo kale xustay doorka muhiimka ah ee dawlad -goboleedyadu ka ciyaaraan gudbinta siyaasado hal -abuur leh oo tusaale u noqda waddanka oo dhan. Tester, dhanka kale, wuxuu xusay in dowlad goboleedyada ay ka faa'iideystaan siyaasadaha federaalka ee hamiga leh iyo maalgelinta taas oo ka caawin doonta ganacsatada iyo bulshooyinka inay u gudbaan tamar nadiif ah.
Tijaabiyuhu wuxuu kaloo ugu baaqay labada shirkadood iyo dawladahaba inay qabtaan shaqo ka wanaagsan sidii loo muujin lahaa tallaabada cimilada ee shirkadaha, taas oo, ayuu yidhi, “in badan oo reer Minnesota ah ma oga” in meheraduhu durba isku duubnaanayaan.
"Goynta ay dadku ogaadaan"
Smith, oo hormuud ka ah Barnaamijka Waxqabadka Tamarta Nadiifka ah ee Capitol Hill, ayaa sheegay in sharci -dajiyayaashu ay u baahan yihiin taageerada codadka shirkadaha hogaaminaya inta ay socdaan wada -xaajoodyada socda. In kasta oo shirkado badan ay mar hore ka go'an tahay waxqabad cimilada, Smith wuxuu xusay, waa inay taas u caddeeyaan sharci -dajiyayaasha - oo ay ku jiraan u ololaynta.
Sharci -dajiyayaasha labada heer federaal iyo heer gobolba “waxay garanayaan farqiga u dhexeeya war -saxaafadeed aad u weyn iyo meherado halkaas ka jira oo si firfircoon uga hawl -gala una ololeeya arrimaha sida tallaabo ka qaadista cimilada,” ayuu yidhi Smith. "Waxaan jeclaan lahaa inaan arko meherad Minnesota soo gasho oo ila hadasho si la mid ah sida ay uga go'an tahay in tallaabo laga qaado cimilada sida aan maqlo…
Smith wuxuu bogaadiyay shirkadihii horey u qaatay mowqifyada dadweynaha si ay u taageeraan xirmada miisaaniyadda iyo siyaasadeeda cimilada. Si kastaba ha ahaatee, meheradaha isu haysta inay yihiin hoggaamiyeyaasha cimilada, ayuu Smith ku boorriyay, inay tahay inay kala soocaan jagooyinka ururradooda ganacsi, kuwaas oo badankood - oo ay ku jiraan Rugta Ganacsiga ee Mareykanka - ay ka soo horjeedaan qorshaha.
Shirkadaha xubnuhu waa inay helaan siyaabo ay farriintaas uga hortegi karaan mid iyaga u gaar ah. Tusaale ahaan, Salesforce ayaa dhawaan daabacday bayaan xoojinaya taageeradooda siyaasadaha cimilada ee xirmada miisaaniyadda. “Way fududahay in xoogga la saaro qiimaha ficilka cimilada, laakiin darnaanta sii kordheysa iyo soo noqnoqoshada dhacdooyinka cimilada ee aan hore loo arag, dilaa ah oo qaali ah ayaa si cad u caddaynaya in qiimaha wax -qabad la’aanta ay aad uga badan tahay,” Salesforce ayaa sidaas yidhi.
Senator Smith ayaa ugu wanaagsan: “Isweydii naftaada: haddii aad dareento in ficilku yahay waxa ku habboon in aad u samayso ganacsigaaga iyo waxa ku habboon in aad u qabato bulshadaada, maxay ka dhigan tahay haddii aad xubin ka tahay Rugta Ganacsiga ee Mareykanka , kaas oo si firfircoon uga ololeeya waxyaabaha aad u jeeddo? Taasi waa goyn ay dadku ogaadaan. ”
"Waa waqtigii la tagi lahaa"
Ku -hadlayaashu waxay ku heshiiyeen: Shirkaduhu waa inay mawqifyadooda ka dhigaan kuwo cod dheer oo cad, dhakhso. Doodda Koongarasku waxay ka dhigan tahay daaqad cidhiidhi ah oo xidhmaysa si loo qaado tallaabada cimilada ee lagama maarmaanka ah.
"Waxaad u baahan tahay inaad tan hadda samayso, maxaa yeelay xubnaha [Koongarasku] waxay isku dayayaan inay qiimeeyaan sida ay tani muhiim u tahay oo codadkaagu aad u xoog badan yihiin," ayuu yiri Smith.
Granholm waxay ku nuuxnuuxsatay in sida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo yoolalka dhimista qiiqa qaranka loona dhiso dhaqaale tamar tamar nadiif ah leh ay tahay in la meel mariyo qodobbada ku jira xirmada miisaaniyadda.
“Marna ma jirin waqti ka muhiimsan oo aan dhammaanteen galno,” ayay tiri Granholm. “Markaan tan wada sameyno, waxay noqon doontaa oksijiinta abuuri doonta koboc dhaqaale iyo shaqo oo aad u ballaaran dalka oo dhan. Oo waxay abuuri doontaa fursado cusub oo cajiib ah oo ganacsi. Waxaan qaadan doonnaa tallaabadii ugu weyneyd taariikhda Mareykanka si aan wax uga qabanno dhibaatada cimilada. ”
"Waa waqtigii la tegi lahaa," ayay tidhi.
Daawo Duubista Dhacdada